Izicelo ze KDE 19.04 zingenako ukuyenza Kubuntu 19.04 | Ubunlog
I-Disco Dingo yasungulwa nge-18 ka-Epreli, ezizinguqulelo zamva nje ze-Ubuntu kunye nazo zonke ezona zisemthethweni. Phakathi kwezi flavour ezisemthethweni sineKubuntu 19.04, inkqubo yokusebenza esetyenziswa yiseva. Kwangolo Aprili 18, uKDE Community yabhengeza qalisa de Izicelo ze-19.04 ze KDE, kodwa kukho into ebonakala ngathi ayisebenzi. Kwaye, nangaphantsi, ukubona ukuba kwiiveki ezimbini emva kokuphehlelelwa kweKubuntu 19.04 bebengekafiki koovimba abasemthethweni.
Kwaye ewe, ii-KDE Izicelo 19.04 sele zikhona, kwaye njengesampulu esinayo umzekelo weKdenlive 19.04 kuhlobo lwayo Flatpakkodwa I-Kubuntu 19.04 isabambelele kwizicelo ze-KDE 18.12.3Inguqulelo ekhutshwe ngo-Matshi 2019. Sele ndikhathazekile, kule veki ndibuze uLuntu lwe-KDE ukuba kwenzeka ntoni, ndicinga ukuba abazukundiphendula, kodwa bandiphendulile, bendixelela ukuba ii-KDE Izicelo 19.04 azifikanga ixesha ngaphambi kweNqaku leFreeze, oko kukuthi, xa i-Canonical iyekile ukwamkela utshintsho ebengekabikho.
Izicelo ze-KDE 19.04 ziya kufumaneka kwi-Kubuntu 19.10
Into endixelele yona yile UKubuntu akabandakanyi iinguqulelo ezintsha zezicelo emva kokumiliselwa kwayo, kuphela ukwamkela utshintsho ukulungisa iibhugi. Yonke into iya kuba ilungele uKubuntu 19.10, uguqulelo oluya kukhutshwa ngo-Okthobha, kodwa kukho into engacacanga ncam: Ngaba akuyi kubakho luguqulelo lutsha lwephakheji yesicelo ngelo xesha? Ngaba sizakuhamba ukusukela ngoku ukuya phambili emva koko kufanele kule ndlela? Ekuphela kwento ebonakala icacile kukuba iZicelo ze-KDE 19.04 aziyi kubakho kwiDisco Dingo.
Abo bafuna ukusebenzisa nasiphi na isicelo kwi KDE Izicelo v19.04 kufuneka bayikhuphele ikhowudi yemvelaphi y yenza ufakelo ngesandla. Ngokwam, ndingathanda ukuba ndisebenzise eminye imisebenzi yezicelo ezinje ngeSpectacle, kodwa yonke into ibonakala ngathi ibonisa ukuba kusafuneka ndilinde ezinye iinyanga ezintandathu, kuba andikuthandi ukusebenzisa usetyenziso oludlala ngee-binaries. Ngethemba ngo-Okthobha baya kukhupha i-KDE Applications 19.10 ngezincedisi ezingakumbi kwaye ngeli xesha bakwixesha. Kuya kufuneka silinde iindaba.
OLUHLAZIYIWEYOEwe baya kongeza iinguqulelo ezintsha kwindawo yabo yokubuyela umva ngendlela efanayo njengoko besenza neenguqulelo ezintsha zePlasma. Baza kulinda i-update, mhlawumbi kule nyanga.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ubunlog » Ulwabiwo olusekwe kubuntu » Kubuntu » Izicelo ze KDE 19.04 zingenako ukuyenza Kubuntu 19.04
Ifikile, ifumaneka ubuncinci kwi-snap, kwaye ezinye iiapps zikwiplppak ngokunjalo.
IFirefox 66.0.4 ikhutshiwe ukulungisa umba wolwandiso
phezulu, umyalelo olula wokujonga imeko yebhetri yelaptop yethu